डँडेलधुरामा ४० रुपैयाँ पर्ने जुनार काठमाडौंमा १८० ! « Drishti News – Nepalese News Portal
डँडेलधुरामा ४० रुपैयाँ पर्ने जुनार काठमाडौंमा १८० !
राष्ट्रिय सुन्तला जात बाली विकास कार्यक्रमको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक ४३ हजार मेट्रिकटन जुनार, १ लाख ७७ हजार मेट्रिकटन सुन्तला र ३९ हजार ५८० मेट्रिकटन कागती उत्पादन हुने गर्दछ । ६५ जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल उत्पादन हुने भए पनि व्यावसायिक रूपमा ४४ जिल्लामा मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा यो समाचार छ ।